Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Jiis Cusub oo Caanaha Bilaashka ah: Microalgae-ka ugu horreeya ee ku salaysan
Sophie's BioNutrients, oo ah shirkad tignoolajiyada wax soo saarka cuntada magaalada ee jiilka soo socda, oo ay weheliso xarunta hal-abuurka ee Ingredion Idea Labs® ee Singapore, ayaa iska kaashaday inay soo saarto farmaajo ku salaysan microalgae-kii ugu horreeyay, oo laga sameeyay Sophie's BioNutrients caano microalgae-la'aan ah. Iyada oo leh vegan, ikhtiyaarrada caanaha aan caanaha lahayn ee farmaajo ayaa kor u kacaya iyada oo laga jawaabayo baahida sii kordheysa ee macaamiisha ee beddelka ku saleysan dhirta, farmaajo-caano-la'aanta ayaa ah wax dheeraad ah oo la filayo.
Hal-abuurnimada farmaajo waxa ay ku faantaa muuqaal dhadhan macaan oo umami ah, iyada oo la jaanqaadaysa jiiska Cheddar ee dabiiciga ah waxaana lagu jeexjeexi karaa guddi farmaajo, lagu dhalaali karaa rooti rooti ah, lagu dhex daadin karo sandwich, ama lagu dhejiyo buskudka ama rootiga sida faafitaan hodan ah iyo gooey.
Wax kasta oo caanaha laga sameeyo, microalgae ayaa samayn kara Cheddar
Kooxda Sophie's BioNutrients waxay iskaashi la sameeyeen kooxda khabiirada farsamada ee Ingredion si ay u abuuraan farmaajo-saaxiibtinimo ee vegan. Waxaa la soo saaray iyadoo la adeegsanayo burka borotiinka microalgae, waxaa loo heli karaa sidii laba nooc oo badeecooyin ah - jiis caano-la'aan ah oo yar-yar oo adag iyo farmaajo aan caano lahayn.
Hal-wiqiyadood oo ah farmaajo yar-yar oo adag ayaa bixiya labanlaab gunnada maalinlaha ah ee B12. Sido kale si joogto ah ayaa loo goostay - wax lo' ah lama gaarin intii lagu jiray howsha - waxayna leedahay raad kaarboon oo hooseeya.
"Microalgae waa mid ka mid ah kheyraadka ugu nafaqeysan ee ugu qanisan meeraha. Maanta waxaan tusnay waji kale oo ka mid ah fursadaha aan xadidneyn ee cunnadan sare ay bixin karto - caanaha iyo lactose-ka beddelka jiiska taas oo ay uga mahadcelinayaan microalgae, waxay bixisa ka kooban borotiinno ka sarreeya inta ugu badan ee beddelka caanaha la heli karo. Aad ayaan ugu faraxsanahay horumarkan ku saabsan cuntooyinka aan xasaasiyadda lahayn iyo rajada cunno badan oo loo dhan yahay,” ayuu yidhi Eugene Wang, Co-founder & Maamulaha Sophie's BioNutrients.
Ai Tsing Tan, Agaasimaha Hal-abuurka ee Ingredion ayaa sidoo kale la wadaagay, "Sida aan u cusbooneysiineyno si aan u daboolno baahiyaha isbeddelka ee macaamiisha, waxaa fure u ah in diiradda la saaro sifooyinka muhiimka ah si loo abuuro badeecad uu doorbido macaamilka. Habkayaga farmaajo-la'aanta caanaha ayaa ah inaan u horumarino sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee farmaajo labadaba dhadhan iyo muuqaal labadaba. Macaamiishu waxay ku raaxaysan karaan khibrad cunista farmaajo vegan oo macaan, la aqoonsan karo oo la jecel yahay.
Ka shaqaynta si loo abuuro mustaqbal cunto oo waara
Hal-abuurkan u dambeeyay waxa uu ka soo horjeedaa dib-u-dhaca baahida xooggan ee macaamiisha ee beddelka caanaha dhirta ku salaysan ee adduunka oo dhan. Korodhka ka warqabka xaaladaha dulqaad la'aanta laktoosku waxay ahayd arrin fure u ah wadista suuqa.
Sida laga soo xigtay shirkadda cilmi baarista suuqa caalamiga ah ee Cilmi-baarista iyo Suuqyada, suuqa jiiska vegan-ka adduunka waxaa lagu qiimeeyay US $ 1.2 bilyan sanadka 2019 waxaana lagu qiyaasaa inuu gaaro US $ 4.42 bilyan marka la gaaro 2027, oo ku fidaya heerka kobaca sanadlaha ah ee isku dhafan (CAGR) ee 15.5% laga bilaabo 2021 ilaa 2027.
Sophie's Bionutrients waxay soo saartaa bur microalgae ah oo aan la dhayalsaneyn oo dhexdhexaad ah oo si dabiici ah looga beeray microalgae hal unug ah oo laga soo goostay saddex maalmood gudahooda deegaan la ilaaliyo.
Noocyada microalgae-ka ee ay isticmaasho Sophie's BioNutrients waa US GRAS iyo Hay'adda Badbaadada Cuntada Yurub (EFSA) oo loo oggolaaday in loo isticmaalo maaddooyinka cuntada ama kaabayaasha.
Ingredion waxay isu keentaa kartida dadka, dabeecadda iyo tignoolajiyada si ay nolosha oo dhan u wanaajiso. Ingredion waxaa ka go'an in ay wanaajiso haqab-beelka cuntada iyada oo loo marayo hab-dhaqannada wax-soo-saarka ee waara iyo wax-soo-saarka la xoojiyey ee lagu taageerayo haqab-beelka cuntada, oo ay ku jirto diiradda saaridda borotiinnada kale. Ingredion waxay siisaa khibrad bixinta badeecadaha ay door bidaan macaamiishu si ay u abuuraan waxa ku xiga ee Sophie's Bionutrients.